Fikradaha Fikradda iyo Dareenka - Erayga Word
Faallooyinka iyo Fikirka
Dib u eegista Buugaagta Fikradaha iyo Taariikhda
Farriintayda keliya ayaa ah caan ah "mahadsanid". Buugani wuxuu saameyn ku yeeshay wadadaydii, furay qalbigayga, waxaanan ku faraxsanahay asalkayga! Waxaan qirayaa in kakanaanta qaar ka mid ah maaddooyinka ay igu adag tahay aniga iyo inaan wali si buuxda u qabsanayo qaar, haddayna ugu badneyn, maaddada. Laakiin, taasi waa qayb ka mid ah sababta aan ugu farxo! Markaan akhriyo wax kasta oo aan fahamsanahay. Harold waa saaxibkeyga qalbigayga, inkasta oo aanan nasiib ku fileyn inaan isaga la kulmay. Waxaan u mahadcelinayaa aasaaska si aan wax uga qabanno kuwa naga mid ah ee u baahan. Anigu weligayba waan u mahadnaqayaa!
Dhab Fikirka iyo Dareenka waa muujin weyn oo muhiim u ah wakhtigeena.
Ballaadhinta iyo qoto dheerta Fikirka iyo Dareenka waa baaxad weyn yahay, hadana luuqadiisu waa cadahay, saxan tahay, waana xariir. Buuggu gabi ahaanba waa asal, macnaheedu waa inuu si cad uga soo jeedo fikirkiisa Percival, sidaas darteedna uu yahay dhar dhan, oo isku mid ah. Ma odoroso, mala awaalo ama mala awaal. Ma sameeyo hadalo waalidnimo. Waxaad moodaa inuusan jirin eray meesha ka baxay, mana jiro eray si qaldan loo isticmaalay ama aan muhiimad lahayn. Mid ayaa heli doona isbarbar dhigga iyo kordhinta mabaadi'da kale iyo fikradaha kale ee ku jira Waxbarista Xikmadda Galbeed. Midna sidoo kale wuxuu helaa wax badan oo cusub, xitaa riwaayad waana lagu xujeyn doonaa. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon laheyd caqli gal in aan lagu deg degin xukunka laakiin la is xakameeyo maxaa yeelay Percival ayaan ka walwal qabin inuu iska difaaco aqristaha aqoon la'aanta mowduucyada sida uu ula socdo ogolaanshaha caqliga soo bandhigiisu inuu qeexo waqtiga iyo isku shaacintiisa. Codsiga Heindel ee "Erayga kuwa caqliga leh" wuxuu noqon doonaa mid si isku mid ah ugu habboon marka la akhrinayo Percival: "waxaa lagu boorinayaa in akhristaha uu haayo dhammaan muujinta amaanta ama eedda illaa daraasadda shaqadu ay si macquul ah ugu qanciso mudnaanteeda iyo xumaanteeda.
Kani waa mid ka mid ah buugaagta ugu muhiimsan ee abid lagu qoro taariikhda la yaqaan ee aan la aqoon ee meerahan. Fikradaha iyo aqoonta la sheegay waxay rafcaan u yihiin caqliga, waxayna leeyihiin "giraan" run ah. HW Percival waa deeq bixiye aan la garanaynin aadanaha, sida hadiyadihiisa suugaaneed ay muujin doonaan, marka eex la'aan la baaro. Waxaan layaabay maqnaanshaha shaqadiisa sare ee liisaska "akhriska lagula taliyay" ee dhamaadka buugag badan oo culus oo muhiim ah oo aan aqriyay. Isagu runtii waa mid ka mid ah sirta ugu fiican ee lagu ilaaliyo adduunyada ragga fakaraya. Dhoolla caddeyn iyo dareen mahadnaq leh ayaa laga dhex muujinayaa gudaha, mar kasta oo aan ka fekero noolahaas barakaysan, ee looga yaqaan adduunka ragga sida Harold Waldwin Percival.
Anigana marnaba lama fahmin, illaa aan helay Fikirka iyo Dareenka, sida aynu si qumman u jebin karno qaddiyadayada ujeedadeena ah.
Fikirka iyo Dareenka yimid OK OK lacag ma soo iibsan karin. Waxaan raadinayay noloshayda oo dhan.
Ma ahayn ilaa iyo intii aan bilaabay daraasadda Fikirka iyo Dareenka in aan xusay horumarka dhabta ah ee noloshayda ka soo baxaya.
Fikirka iyo Dareenka by HW Percival waa mid ka mid ah buugaagta cajiibka ah ee abid la qoro. Waxay ku saabsan tahay su'aasha da'da weyn, Quo Vadis? Xagee ka nimid Maxaan halkaan u nimid Xagee ku socotaa Wuxuu sharaxayaa sida fikradaheena u noqdaan mustaqbalkeena, ficil ahaan, walxo, iyo dhacdooyin, nolosheena shaqsiyeed. In qofkasta oo inaga mid ahi masuul ka yahay fikirradan, iyo saamaynta ay ku leeyihiin annaga iyo dadka kaleba. Percival wuxuu ina tusayaa in waxa umuuqda "fowdo" nolosheena maalinlaha ah ay leeyihiin ujeedo iyo Amar kaas oo la arki karo hadii aan bilaabi doono inaan diirada saarno fikirkeena, oo aan bilowno fikirka dhabta ah, sida ku qeexan hal abuurkiisa sare. Percival laftiisa ayaa qiraya inuusan ahayn wacdiye ama macalin, laakiin wuxuu noo soo bandhigayaa cosmology ku saleysan Sirdoonka. Caalamka A Order iyo Ujeeddo. Ma jiro buug metaphysical weligiis soo bandhigay macluumaad cad, oo kooban, oo laga heli karo buuggan. Runtii waxyi iyo dhiirigelin!
Fikirka iyo Dareenka waa wax cajiib ah aniga. Waxay igu samaysay adduun wanaagsan oo run ahaantii waa jawaabta da 'aan ku noolahay.
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in Fahamka Xikmadda-Fahan-iyo Fikradda iyo Fikradaha aan caddayn ee ku jira Fikirka iyo Dareenka by HW Percival waa qiimo ka badan. Waxay ku sarreysaa farriimaha qoraaga ee diimaha adduunka oo, marka la barbardhigo Percival, waxay u muuqdaan kuwo aan caddayn, oo aan caqli gal ahayn. Qiyaastayda waxay ku salaysan tahay cilmi baarista 50. Kaliya Plato (aabaha falsafadda reer galbeedka) iyo budhcadnimada Zen (oo soo horjeeda) ayaa meel walba u dhaw meel Percival ah, kuwaas oo labadaba si toos ah iyo si dhammeystiran u wadaagaya!
Percival wuxuu runtii 'dhejiyay ilmagaleenka,' iyo buugiisa wuxuu furay qarsoonaanta caalamka. Waxaan u diyaarsanayay jaakad cakiran ama deeq bixiye markaan buuggan la ii dhiibay.
Fikirka iyo Dareenka waa daaweyn aad u fiican oo ku saabsan maadooyinka kala duwan ee maadooyinka metaphysical waana wax ka mid ah ansixinta ee ku saabsan arrintaas. Waan hubaa inaan sii wadi doono inaan u gudbiyo casharrada iyo shaqadeyda.
Waxaan baranayay farsamooyin badan sanado badan, ninkanna waxa uu ogaa sida isku dhafka loo wada dhafan yahay, oo wuxuu soo saaraa hodan qaali ah oo noloshu tahay iyo cidda aanu nahay.
Inkasta oo aan akhriyay bartayaal badan oo ka mid ah Theosophy iyo asal ahaan qaddar fara badan oo feker ah, haddana waxaan dareemayaa in Fikirka iyo Dareenka waa bukaanka ugu caansan ee ugu caansan uguna macquulsan buugiisa. Waa mida kaliya ee aan ku hayn lahaa aniga, haddii aan jirey sabab aan ka soocay dhammaan buugta kale.
Waan akhriyay Fikirka iyo Dareenka laba jeer oo hadda waa ay adag tahay in la rumaysto in buug weyn oo run ahaantii jira.
Intii lagu jiray tobaneeyo sano ee la soo dhaafay waxaan soo bandhigay dhul aad u yar oo wax ka barata iskuulo kala duwan oo ka walaacsan dabeecadda nin ee dareenka cidhiidhiga ah iyo sidoo kale dareenka ugu ballaaran. Aad iyo aad u tiro badan oo ka mid ah dugsiyadii iyo shaqooyinkii aan wax ku baranayey waxay lahaayeen wax qiimo leh si ay u soo bandhigaan dabiiciga dhabta ah ee dadka iyo qaderkiisa. Ka dibna hal maalin maalintiiba waan booday Fikirka iyo Dareenka.
Iyada oo ah cilmi-nafsi-takhasus, waxaan isticmaalay shaqooyinka Mr. Percival si loo sii wanaajiyo iyo fahamka shakhsiyaadka badan ee isku-buuqsan-oo ay u shaqeyso!
Ninkeyga iyo aniga waxaan akhriyey qaybo ka mid ah buugiisa maalin kasta, waxaanna ogaanay in wax kasta oo socda, haddii uu jiro ama ka maqan yahay, lagu sharxi karo fikradihiisa runta. Waxa uu amar ku bixiyay amar macquul ah oo aan arko maalin kasta. Aasaaskii ruxay ayaa degay xasillooni aan lahayn argagax. Waxaan rumeysanahay Fikirka iyo Dareenka waxaa laga yaabaa in buugga ugu cajiibsan abid qoraal ah.
Buuga ugu wacnaa ee aan akhriyo; aad u qoto dheer waxayna sharraxaysaa wax walba oo ku saabsan jiritaanka qofka. Budhha waxa uu yidhi waa hore fikirkaasi waa hooyada fal kasta. Ma jiro wax ka wanaagsan buugan si aad si faahfaahsan u sharaxdo. Mahadsanid.
Dhamaanteen waan maqalnay labadan qodob oo kala ah, "Qaadashadaada oo dhan, faham," iyo "Man naftaada is yaqaan". Waxaan ogsoonahay inaanan jirin wax kale oo ka sii fiicnaanaya helitaankani marka loo eego shaqooyinka Harold W.